Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailandey » Thailand, fizahan-tany ary faritra mena maizina: tsy vaovao tsara
Vaovao Mafana Thailandey • Vaovao • fanorenana • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny faritra COVID any Thailand dia manampy faritra mena maizina
Tsy vonona handray ireo mpizahatany i Thailandy atsy ho atsy. Miitatra ny Delta variant, mihidy faritany maro kokoa ny fanjakana - ary mety haharitra iray volana izany.
Nanitatra ny fepetra fanidiana sy ny tsy fahazoana mivezivezy mandritra ny roa herinandro ny governemanta Thailandy nanomboka ny talata lasa teo niaraka tamin'ny faritany 16 fanampiny nampiana ny lisitr'ireo "faritra mena sy mena ary mavo ary voafehy henjana", faritra tena voa mafy tamin'ny areti-mandringana Covid-19.
Ny Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) dia nandidy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny 9 ora alina - 4 maraina ary fepetra henjana hafa no hapetraka ao Bangkok sy faritany 28 hafa ao Thailand mandritra ny tapa-bolana manomboka rahampitso.
Ny CCSA dia antenaina hanombatombana indray ny toe-pahavoazana amin'ny 18 Aogositra. Mety hisy fanitarana fanidiana hafa mandrapahatongan'ny faran'ity volana ity.
Ny CCSA kosa dia nanalefaka ny famerana ho an'ny trano fisakafoanana sy fisakafoanana amin'ny tsenambarotra mena ary mamela azy ireo hivarotra sakafo amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera.
Ny fameperana misy ao amin'ny faritra mena maizina dia hijanona eo amin'ny toerany, ao anatin'izany ny sisin-dàlana amin'ny fivezivezena isam-paritany.
Izay te hiditra amin'ny faritra mena mainty dia tsy maintsy manana antony mety ary ho voasarika rehefa miditra.
Tsy mihoatra ny 5 ny olona mahazo mihaona.
Nakatona ny magazay fiantsenana, fivarotana lehibe ary ivontoerana fiantsenana fiarahamonina, afa-tsy ny fivarotana lehibe, fivarotam-panafody ary tobim-panatanjahantena. Voafetra ho 9% ny fahafahan'ny fitateram-bahoaka
Ny olona any amin'ny faritany faritra mena mainty dia asaina miasa any an-trano.
Ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy sy ny fanidiana dia nampiharina tany Greater Bangkok - Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani ary Nakhon Pathom, ary koa ny faritany efatra atsimo amin'ny faritanin'i Pattani, Yala, Narathiwat ary Songkhla nanomboka ny 12 Jolay.
Chon Buri, Chachoengsao, ary Ayutthaya dia nampiana ho ao anatin'ny lisitra ny 20 Jolay. Tapitra ny alatsinainy izao ny fepetra.
Ny CCSA omaly dia nanampy faritany 16 hafa ho an'ny lisitra faritra mena mainty - Ang Thong, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Lop Buri, Phetchabun, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Ratchaburi, Rayong, Samut Songkhram, Saraburi, Sing Buri , Suphan Buri, ary Tak.
Fantatra fa ny tahan'ny aretina ao Bangkok dia nampiseho fihenan'ny fihenam-bidy, mitaky 39% ny aretina manerana ny firenena raha toa ka miakatra ny tahan'ny aretina any amin'ny faritany hafa noho ny karazana Delta.
Ny Governemanta Thailand dia mandrindra ny fanafarana ny vaksinin'ny Sputnik Rosiana mba hanomezana vaksiny an'ireo mpiasa lohalaharana.
Nanaiky ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana fa mety hitohy mandritra ny roa volana manaraka ny tahan'ny aretina avo lenta ao Thailand.
Thaniwan Kulmongkol, filohan'ny Fikambanan'ny Thai Restaurant, dia nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny CCSA hamela ny trano fisakafoanana amina magazay mivarotra sakafo an-tserasera.
Ny firenena dia nahitana tranga vaovao 18,027 ary fahafatesan'ny Covid-133 vaovao 19 tao anatin'ny 24 ora lasa izay.